Tattoos Tattoos - Cool Hawaiian Tribal Tattoos For Women
Egwuregwu Art echiche nke Tattoos Nwere ike 14, 2017
1. Ụdị Ọkpụkpụ Ụmụaka Na-atụgharị Anya Ụdị Ụmụaka na azụ azụ maka ụmụ nwanyị
2. Echere umu ahihia umu ahihia umu nwanyi n'olu na ubu
3. N'anya Ụmụ nwanyị - Achọpụta Ụdị Ụmụaka nke Ụmụaka mara mma
4. Nnukwu Ụdị Ụdị Ụmụaka Na-ahụ Maka Ụdị Ụmụaka na-adabere na azụ maka Women
5. Mmasị na-adọrọ mmasị na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke nke Ụmụaka Ụmụaka nke Ụmụaka na ụkwụ maka ụmụ nwanyị
6. Ogbugbu ndi mmadu na-agbasi ike na-agbanye na nwa agburu
7. Echiche egbu egbu nke ụmụ nwoke na-agbanyeghị aka na asụsụ nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị
8. Nnukwu ngwa ngwa nwa agbụrụ ụmụ Izrel na-azụ echiche igbu egbu maka ụmụ agbọghọ
9. Obere umuaka nke ndi mmadu na umu anu umu egbugbu umu anu umu nwanyi n'ubu ubu
10. Na-eme ka echiche igbu egbugbu nke ụmụ nwoke na-akpụ akpụ na-adabere na ya
11. Ntughari di iche iche na-echekwa echiche umu igbu umu umu mmadu
12. Magburu onwe ya na ụmụ nwanyị na-eme ihe dị mma
13. Ihe omuma gbasara oke ogbugbu umu mmadu
14. Echiche egbuke egbuke nke ụmụ nwoke na-atụ egwu nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị
15. Aesthetic looking orchid Hawaiian Tattoo Ideo na azụ maka Women
16. Na-achọ tattoo tattoo ụmụ nwoke na azụ maka ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị
17. Ụdị Ụdị Ụmụaka na-atụ egwu dị mfe na orchid n'ubu maka Ụmụ agbọghọ
18. Ụdị igbu egbugbu dị iche iche nke Ụmụaka na-akpụ akpụ na ụmụ anụmanụ
19. Na Ụmụ nwanyị - Ụdị Ụdị Ụmụaka Na-egbuke egbuke nke Ụmụaka na azụ na olu
20. Na-emepụta ihe dị iche iche na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke ndị mmadụ na-agbanye n'olu
21. Ebube egbuke egbuke umu ahihia umu orchid nke umu ohia nke umu agburu
22. Akpan akụrụngwa ndị na-egbu egbu nke ụmụ agbụrụ na-adọrọ adọrọ na ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ
23. Ogbi gbara agba nke na-egbuke egbuke nke ụmụ amaala ndị na-azụ atụrụ na-eche echiche banyere ime ụmụ nwanyị
24. Ụdị akpụkpọ anụ agbụrụ ndị dị na Cool na azụ azụ maka ụmụ nwanyị
Ụdị Ụdị Ụmụaka
Egwu tattoo bụ otu n'ime ụdị eji egbu egbu nke oge a. Akụkụ ndị a na-egosi na ọdịnala na-egosi ọdịbendị na ihe nketa nke Islands Islands site na akara na usoro dị iche iche. Ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-etinye tattoos ndị a dị ka njikọ nke ọdịbendị ndị a. Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ na-egbu ahụ ha dum n'isi. Ọ bụ ezie na ụmụ nwanyị anaghị egbu ahụgbu, ha nwere oke mma igbu egbugbu. Onye ọ bụla na-egbu egbu bụ ihe atụ ma nwee mmetụta miri emi. Na omenala, a na-egbu tattoos naanị na agba aja.
Ink nke oge ochie bụ ntụpọ nke ash na sulu na-etinye ya n'ime ihe dị omimi nke dị n'ahụ onye ahụ ma kwere ka ọ kpoo ka pigments ghọọ nwa. Mgbe e mesịrị, ink sitere na ngwakọta nke kukui mkpụrụ na ihe ọṅụṅụ mmiri shuga. Ihe ndi mmadu na-ejikarị agwakota ihe ndi di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche bu ndi ozo. Ndị Katọlik kwuru na ụdị egbugbu dị ka 'onye na-ede' na igbu egbugbu n'oge ochie bụ ihe nnọchianya nke obi ike ha ka ha na-enwe usoro ihe mgbu dị egwu.
Ụdị ọdịnala eji ejiji geometric na akara ntanetị ejiji na ink ojii iji mee ka ntinye ofufe okpukpe, ọhụụ nke ihe odide, obi ike na agha, ọnọdụ, ọkwa, na ihe nketa. Otú ọ dị, akwụkwọ akụkọ a na-ahụ maka oge a na-eweta ihe dị iche iche na agba ma nwee mmetụta dị mma n'ihi mmetụta nke omenala ọdịda anyanwụ. A nabatara mkpịsị omenala ndị a maka ebumnuche dịgasị iche iche dịka njirimara onwe onye, ​​nchebe, ncheta nke ndị a hụrụ n'anya, ịchọ mma, ọnọdụ ime mmụọ, ihe nketa ezinụlọ na maka ọnọdụ dịka dike. Ihe ọ bụla dị iche iche bụ ihe pụrụ iche na ihe mere onye ọ bụla ji ahọrọ ụdị igbu egbu bụ nke onwe ya.
Otú ọ dị, e nwere ole na ole nke mkpịsị akịngụ ndị a na-ejikarị eme ihe, dị ka:
Gecko: Otu n'ime ihe kachasị ewu ewu na nke kachasị mma na egbugbu ndị mmadụ bụ Gecko dịka a na-ekwenye na ya nwere ike karịrị nke mmadụ. Njikọ nke ụmụ amaala nke ụmụ amaala nke ugwu na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị na nke mara mma.
Ndị Sharks: a na-ewere mmụọ a dị ike dịka ihe dị nsọ site n'aka ndị oge ochie ma bụrụ ihe nnọchiteanya nke nchekwa maka onye na-ekpuchi ya.
Tiki: E kweere na Tiki bụ mmadụ mbụ, nna ochie nke ụmụ mmadụ. Tiki nwere ike isi ísì ísì ọjọọ n'ihi ísì ísì.
Ụlọ akwụkwọ: Na oge ochie, a na-eji shells dị ka ụdị ego, n'ihi ya kwa, ọ dị ka ha yiri ọganihu na akụ na ụba.
Azụ Uhie: Azụ ụgbọ mmiri bụ ihe nnọchianya nke ogologo ndụ na ọmụmụ.
Tropical okooko osisi: A na-ejikarị akịkị, anthurium na hibiscus mee ihe na akụrụngwa. Orchid na-anọchi anya ịhụnanya, ịma mma, okomoko, na ebube. Anthurium bụ uhie uhie nke na-anọchite anya ile ọbịa, obiọma, na ọbụbụenyi. Hibiscus, a na-ejikọta osisi a na-ewu ewu na nke kachasị mma nke asụsụ na oge okpomọkụ na ntụrụndụ.
Nhọrọ ndị ọzọ a na-ahụkarị bụ ndị na-egwu egwú, Leis na Volcanoes.
Atụmatụ tattoo egbugbu bụ ndị buru ibu ma buru ibu karịa ndị ọzọ Polynesian tattoos, na-eme ka ọ bụrụ nkà. Nweta otu, ma ọ bụrụ na ị hụrụ ezigbo mma n'anya. Họrọ onye na-anọchi anya gị ma jiri ya kpọrọ ihe na ndụ gị niile.
Tags:akuku tattoos egbugbu maka ụmụ agbọghọ agbụrụ ebo
Egwuregwu Art echiche nke Tattoos
Abụ m Ritu na otu otu maka https://tattoosartideas.com.
Ntuba ntugharindị mmụọ ozirip tattoosegbu egbu okpuọdụm ọdụmegbugbu maka ụmụ agbọghọakpị akpịakwara obidi na nwunyeegbu egbu ebighi ebiechiche egbugbuenyí egbu egbuegbu egbu maka ụmụ nwokeegbu egbu hennaudara okooko osisiAnkle Tattoosnnụnụmehndi imeweegbu egbu diamondokpueze okpuezendị na-egbuke egbukeegbu egbu egbun'olu oluna-adọ aka mmamma tattoosaka akazodiac akara akaraọnwa tattoosUche obingwusi pusiegbu egbu mmiriegbu egbuenyi kacha mma enyiegwu egwuGeometric Tattoosima ima mmaagbụrụ eboaka mma akaụmụnne mgbuakara ntụpọazụ azụụkwụ akaegbu egbu osisi lotusegbugbu egbugbuna-egbu egbuaka akaEgwu ugokoi ika tattooỤdị ekpomkpaarịlịka arịlịka